မြန်မာ့ သမိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ များသည် တိုင်းရင်း သား လူမျိုးစု တခုအဖြစ် ရပ်တည် ခဲ့ | Danya Wadi
»မှတ်စု»မြန်မာ့ သမိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ များသည် တိုင်းရင်း သား လူမျိုးစု တခုအဖြစ် ရပ်တည် ခဲ့
Posted by danyawadi on May 5, 2012 in မှတ်စု, သမိုင်း, ဆောင်းပါးများ
လူသားတိုင်း ရသင့်ရထိုက်သော ရပိုင်ခွင့်၊ ခံစားခွင့် များကို လူမျိုးဘာသာမရွေး ရရှိသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ Human Rights – (လူ့အခွင့်အရေး) ကိုတန်ဖိုးထားရာ ရောက်ပါမည်၊ Human Rights သည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ထူထောင်ရေးတွင် အဓိကအခြေခံကြသော မရှိမဖြစ်အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် Human Rights ကို လေ့ကျင့်မှု၊ တန်ဖိုးထားမှု အားနည်းသော စစ်အစိုးရလက်အောက်ရှိ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများ သည်လည်း အနဲနှင့်အများ Human Rights ၏ တန်ဖိုးကို အပြည့်အဝနားမလည်ကြပါ။ ယ္ခုအချိန်သည် မြန်မာလူမျိုးများ အားလုံးအတွက် မျက်စိဖွင့် နားပွင့်၍ လူမျိုးဘာသာမရွေး အတူလက်တွဲရတော့မည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည် သို့မဟုတ်ပါက စစ်အစိုးရ၏ သွေးခွဲ၊ မှိုင်းတိုက်၊ သွတ်သွင်းခြင်း၌ ဆက်လက်၍ ဝဋ်ခံနေရ ဦးပေမည်။
နောက် အဓိကအချက်တစ်ရပ်သည် ဘာသာရေးသွေးခွဲမှုဖြစ်ပေသည်။ နအဖ၏ နိုင်ငံတော်မတည်ငြိမ်အောင် ဖန်တည်းရေးမူတွင် ထိုအချက်သည် အရေးအပါဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံး လက်နှက်ဖြစ်ပေသည်။ ယ္ခု ထိုလက်နှက်ကို နအဖ မှ အပူတပြင်းအသုံးပြုနေပါသည်။ အထူးသတိပြုကြပါ။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းကို ဖော်ဆောင်နေပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နှင့် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များ အတွက်ဖြစ် အထူးသတိရှိကြပြီး အမြင်ကျယ်ကျယ်ဖြင့် နားလည်မှုရယူ၍ ဘာသာရေးအစွန်းမရောက် ကြစေလိုပါ။ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်လည်း အထူးတိုက်တွန်းလိုသည်မှာ မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားသည် မေတ္တာတရားနှင့်သာ လူသား များ ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါသည် တခြားဘာသာကို မုန်းတီးပါဟု မဟောကြားခဲ့ပါ။ ယ္ခုအချိန်သည် နအဖစစ် အစိုးရ ကိုသာ အဓိကထားတိုက်ခိုက်ကြပါ၊ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ဘာသာအချင်းချင်း လူမျိုးအချင်းချင်း တိုက်ခိုက် ရမည့်အချိန်မဟုတ်ပါ။ ကျတော်တို့စည်းလုံးမှ အောင်ပွဲရပါမည်။ စည်းလုံးကြပါ။ ညီညွတ်ကြပါ။
အမြင်မရှင်းသည်များရှိပါက ရှင်းလင်းမှုရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များကို သတင်း ရက်စွဲ အတိ အကြဖြင့်ဖော်ပြထားသော ခွပ်ဒေါင်းသွေး မှ ရယူ၍ ထက်မံမျှဝေလိုက်ရပါသည်။
မြန်မာစစ် အစိုးရ သည် ယခုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များ အရေးနှင့်ပါတ်သက်၍ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတို့သည်မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုမဟုတ်ပါ ၊ ရိုဟင်ဂျာ များ သည် မြန်မာပြည် နှင့်မသက်ဆိုင် ကြောင်း ကို နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှ ခါးခါးသီးသီး ငြင်းဆန် ခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းအဆက်ဆက်တွင် ရိုဟင်ဂျာ များအားမြန်မာအစိုးရတို့က တိုင်းရင်သား လူမျိုးစုတခု အဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုခဲ့သည်များ ရှိခဲ့ပါသည်…။
မြန်မာပြည်အတွင်းတွင် ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်ကပင် အခြချနေထိုင်လာခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး တို့ သည် ရခိုင်ပြည်လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်နီးပါးရှိသည်။ ထို့အပြင် ( ၁၉၄၇-၁၉၇၄ ) ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရ လည်းကောင်း ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှု့ ဥပဒေ နှင့်၁၉၈၂ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေများ အရ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည် ၁၈၂၃ ခုနှစ်မတိုင်မီကပင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပင်မနိုင်ငံအဖြစ် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော လူမျိုးစု များဖြစ်ခဲ့သည်ကို အတည်ပြု ပြောဆိုနိုင်ပါသည်…။ နိုင်ငံသား ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ဖြစ်ခြင်းသည် ကိုးကွယ်မှု့၊ ယုံကြည်မှု့၊ ဘာသာစကား ၊ အရုပ်သဏ္ဍန် ၊ အမျိုးအနွယ်တို့နှင့် မသက်ဆိုင်ပဲ ရှေးအစဉ်အဆက် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော နိုင်ငံတခုအတွင်းရှိဒေသ နှင့်သာသက်ဆိုင် သည်ဟု သမိုင်းစာအုပ်အချို့တွင်ဖော်ပြ ထားပါသည် ။
ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ ခေတ်တွင် ရိုဟင်ဂျာ များအား အစိုးရပြန်တမ်းများတွင် မွတ်စလင် ၊ မဟာမေဒင် အစရှိသည် ဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည် ။ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ၁၉၄၆ ခုနှစ် မတ်လ တွင် စစ်တွေမြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ ဆုံ ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အခွင့်အရေးများအပြည့်အ၀ပေးမည်ဟုကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည်များရှိခဲ့သည်။
မြန်မာ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းများတွင်လည်း တော်လှန်ရေးကာတလျှောက် လက်တွဲပါဝင်ခဲ့သူ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတော် လှန် ရေးသမားတဦးဖြစ်သည့် ရွှေဓါး ကာဇီ (ခ) မင်းပြား သည် ချင်းပျံ နှင့် အတူ လက်တွဲ ကာတော်လှန်ခဲ့သည် ။ စစ်တွေမြို့တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားဆရာကြီး ဦးဇိုင်နဒိန် က ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသားကျောင်း တကျောင်းဖွင့်လှစ်ကာ နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးအတွက် အမျိုးသားရေးစိတ် နိုးဆွပေးခဲ့သော အမျိုးသားကျောင်း တကျောင်း တည်ထောင်ခဲ့သည် ။
သို့သော်လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်နောက်ပိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ များအား နိုင်ငံရေး ၊ လူမှု့ရေး ၊ စီးပွားရေး တို့ တွင် နိုင်ငံတော်မှ လစ်လျှုရှု့ ခံထားံရမှု့ကြောင့် ( မူဂျာရစ် ) သူပုန်များအမည်ခံကာ ( ဗ-က-ပ ) ( ကရင် ) တို့ နှင့် မရှေးမနှောင်းမှာပင်သူပုန်ထကြွခဲ့ပါသည်။နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များက ရိုဟင်ဂျာ များအား အခြားတိုင်းရင်းသားများနည်းတူ တန်းတူအခွင့် အရေးများပေး မည်ဆိုသော ကတိက၀တ်ကြောင့် ( ၁၉၆၁ ) တွင်တယောက်မကျန်လက်နက်ချကာ ပြည်ထောင်စုအပေါ် သစ္စာရှိခဲ့ကြသည် ။
ထိုအပြင် ဒိုင်အာခီခေတ်မှမြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ခေတ်အထိ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် ပါလီမန် နှင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်များတွင်ကိုယ်စားပြုခွင့်ရခဲ့သည် ။ ပ-ထ-စ ခေတ် တွင် ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ်မှာ တင်မြှောက်လိုက်သော ကိုယ်စားလှယ်တဦးသည် ၀န်ကြီးရာထုး အထိရခဲ့ဘူးသည် ။ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားများထဲမှ လည်း ပါလီမန်အတွင်းဝန်များအထိရှိခဲ့ ဘူးသည်ဟု မှတ်တမ်းများ အရ သိရှိခဲ့ရပါသည်။
ထိုအပြင် ပြည်ထောင်စုနေ့အခန်း အနားများတွင် ရိုဟင်ဂျာရိုးရာပွဲများ ခင်းကျင်ပြသခွင့် ရခဲ့ပြီး
( ၁၉၆၀ )ပြည့်နှစ်ပြည်ထောင်စုနေ့ အခန်းအနားကို အောင်ဆန်းအားကစားပြိုင်ဝင်း အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု့ ပြပွဲပြိုင်ပွဲတခုဖြစ်သော ကျင်ပွဲ ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခွင့် ရခဲ့ပါသည် ။ ၎င်း ကျင်ပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သော ကျင်သန်များမှာ-
( ၁) ကျင်သန် ဦးဟာကိမ်အလီ
မှတ်ပုံတင်အမှတ် – AK – ၀၄၂၉၅၇
ဇင်ပိုင်ညှာရွာ ၊ မောင်းတောမြို့။
( ၂ ) ကျင်သန် ဦးမာမတ် ဟူဆင်
လောင်းဒုံ ၊ အလယ်သံကျော် ကျေးရွာ ၊မောင်းတောမြို့ တို့ဖြစ်ကြပါသည် ။
ထို့နောက် မြန်မာ့အသံ တိုင်းရင်းသား အစီအစဉ်မှ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာ စကားကို နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ( ၅ ) နှစ်တိုင်တိုင် အသံလွှင့်ခွင့်ပြုခဲ့သည် ။
မြန်မာအသံမှ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကားထုတ်လွှင့်မှု့ကို ( ၁၉၆၁ ) ခုနှစ် မေလ ( ၁၅ ) ရက်နေ့ညနေ ( ၅း၃၀ ) မှစတင်ကာ လှိုင်းတိုမီတာ ၆၂ .၆၇ နှင့် ၂၆ . ၁၇ တို့ မှ ရိုဟင်ဂျာဘာသာဖြင့် တိုင်းရင်းသားအသံလွှင့် အစီစဉ်များ တွင် တပါတ် လျှင် သုံးကြိမ် ထုတ်လွှင့် ခဲ့ပါသည် ။
၁၉၅၉-၆၀ နှင့် ၁၉၆၀-၆၁ ပညာသင်နှစ်များတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရိုဟင်ဂျာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အသင်းကို တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်များက ဖွဲ့ စည်းခွင့် ပြုခဲ့ပြန် သည် ကိုပုံပါအတိုင်းတွေ မြင်နိုင်ပါသည် ။
ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ် သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၁၉၇၈) -ခုနှစ်ထုတ်မြန်မာနိုင်ငံ ပထ၀ီဝင် အထက်တန်းကျောင်းသုံးပြဌာန်းစာအုပ် ၊ စာမျက်နှာ ( ၈၆ ) ရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များပြန့် နှံနေ ထိုင်ပုံပြ မြေပုံတွင် လည်း ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတို့ ၏နေထိုင်ရာဒေသ ကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည် ကိုမြင်တွေ့ နိုင်ပါသည် ။
အထက်ပါ သမိုင်းအချက်အလက်များ လေ့လာကြည့်ရှု့ခြင်းအားဖြင့်လက်ရှိ စစ်အစိုးရ သည် ၎င်းတို့ အားထိ ပါးလာမည့်ပြသနာများအတွက်ဆိုပါမူ လူတဦးတယောက်ကို မဆိုထားနှင့်လူမျိုးစု တစုလုံး ကို ပါ ဥပဒေမဲ့ မျက်ကွယ် ပြုမူတတ်သည် ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ မြင်နိုင်ပါပြီ ။ ပြည်သူတို့၏ အသက်အိုးအိမ်စည် ကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း လုံးဝမရှိသည့် အစိုးရဖြစ်ပါသည် ။ ထို့ ကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ နှင့် ပြည်သူများသည် လက်ရှိပြုလုပ်နေသော စစ်အစိုးရ ၏ အာဏာတည်မြဲရေး အတွက် စည်းရုံးသွေးဆောင်နေမှု့ များကို လက်မခံပဲ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသော စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ပေါက် လာစေရေးအတွက် စည်းစည်း လုံးလုံး သိုက်သိုက် ၀န်းဝန်း ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါစို့ဟူ၍တိုက်တွန်း နိုးဆော် လိုက်ရပါသည် ။
ရိုဟင်ဂျာအပါအ၀င်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ( ၁၄၄ ) မျိုး နှင့် နိုင်ငံခြားသားလူမျိုး ( ၂၆ ) မျိုးရှိခဲ့
လူတိုင်းတိုင်းသည်နိုင်ငံချစ်စိတ်ထားရှိရမည်။မိမိလူမျိုးကိုချစ်မြတ်နိုးသည်ဆိုပြီး လူမျိုးကို ခုတုံး လုပ်ပြီး တိုင်းပြည် မငြိမ် မသက်ပြု လုပ် သူသည် နိုင်ငံတော်သစ္စဖေါက်ဖြစ် သည်။ တိုင်း ပြည် တည်ငြိမ် အောင်၊ အန္တရယ် မ ရောက် စေရန်အကာအကွယ်ပေး ရန်နိုင်ငံသား တိုင်း တွင် တာဝန်ရှိသည်။ သမိုင်း အမှန်ကိုဖုံးကွယ်ပြီး လူမျိုးရေး ပုတ်ခတ် ပြော ဆို ကာဝါဒဖြန့်ချီခြင်း၊ ၀ပ်ဆိုဒ်အသီသီး မဟုတ် မမှန် လုပ်ကြံပြောဆို ရေးသားခြင်းဖြင့် တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း စိတ် ၀မ်း ကွဲအောင်ဖန်တီးပြီး လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ် အောင် ဖန်တီး သူများ သည် နိုင်ငံတော် သစ္စဖေါက်များဖြစ် သည်။ တိုင်းချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်မရှိသူဖြစ်သည်။၀ပ် ဆိုဒ် အသီးသီး တွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးနှင့်ပါတ်သက်၍ သမိုင်း အမှန်က ဖုံးကွယ်ပြီးမဟုတ်မမှန် လီဆယ် ရေး သားကာ တိုင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံး ညီညွတ်မှု ပြိုကွဲအောင် လုပ်ပြီး လူမျိုးရေးပဋိပက္ခ ကုလားရခိုင် အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ပြသနာ ဖန်တီး နေခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်နိုင်ငံတော်ကချမှတ်သော မူဝါဒမှာ —
ပြည်သူ့သဘောထား (၄)ခုအနက် ၂ ခု ဖြစ်သောနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံတော်
ထို့ကြောင်း ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီး နိုင်ငံတော် ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပျက် ပြားသွားစေရန် လုပ်ကြံဖန် တီးနေသဖြင့် သမိုင်း ပညာရှင် များက ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှင့်ပါတ် သက် ၍ မည်ကဲ့ သို့ရေး သား ဖေါ်ပြထား သည် ကို တိုင်းရင်း သား အားလုံးက သိရှိစေရန် နိုင်ငံတော် အပေါ် စေတနာမေတ္တာရှေ့ ထားပြီး အခုလို ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကို သမိုင်းအထောက် အ ထားနှင့် တကွ ရေးသား တင်ပြခြင်းဖြစ် ပါ သည်။ဝပ်ဆိုဒ် အသီးသီး`၌မဟုတ် မမှန်ရေး သားပြီးသွေး ထိုးလှုံ့ဆော် သူမှာဘင်္ဂလားဒေရ်ှဘက်မှာ ခိုးဝင် နေထိုင်သော အနောက်သား ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင် လူမျိုးများဖြစ် သည်။ ရခိုင်ပြည်အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေရ်ှဘက် မှာခိုးဝင်နေ ထိုင်သော အနောက် သား ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင် လူမျိုး မှာ အနည်းဆုံးခန်းမှန်းခြေ ၃၅ % ခန့်ရှိ မည်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်တွင် ဘင်္ဂလားဒေရ်ှမှနိုင်ငံခြားသား ရခိုင်လူမျိုးများ ၀င်ရောက်နေ ထိုင် အ ထောက် အထား တစ်ခု တင်ပြရလျှင် ယခင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကောင်စီကောင်ဥက္ကဌ ဖြစ် ခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးကျော် မောင် သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွါးမြန်မာ နိုင်ငံသား မဟုတ်ကြောင်း တိုင်ကြား ခံရပြီး နောက် ပြည်နယ်ပြည် သူ့ကောင်စီဥက္ကဌရာထူးမှ ဖြုတ်ချခဲ့သည်ကို ထောက်ရှူ လျှင် ရခိုင် ပြည်တွင်အနောက်သားရခိုင် လူမျိုး မည်မျှဝင်ရောက်နေထိုင်ကြောင်း ခန်းမှန်းနိုင် သည်။ ထိုအနောက်သားရခိုင်းသားများ ကို လ၀က ရုံးတွင် စာ ရင်းသွင်းပေး၊သန်းကောင်စာရင်းများပြု လုပ်ပေးပြီး ဒေသခံ ဖြစ် အောင် လုပ်ပေး သော်လည်း ၎င်းတို့၏ မူရင်းအမည်စာရင်းမှာ(လ၀က) ရုံးချုပ် တွင်လုံ့ဝမရှိနိုင်ကြောင်း ၊ နိုင်ငံ တော် အစိုးရက ထိုကဲ့ ခိုးဝင် လာသော ရခိုင်သား များ ကိုဖေါ်ထုတ်အရေးယူ မှသာလျှင် တိုင်း ရင်းသား အချင်း ချင်း ကြားတွင် သွေးထိုး မှု၊ လုပ်ကြံလီ ဆယ်မှု၊ စိတ်ဝမ်းကွဲပြု လုပ်မှုများ လျော့ပါးသွား မည်ဖြစ် သည်။
ထို့ကြောင်းတိုင်းရင်းသားအားလုံးက ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းအမှန်ကိုသိရှိနားလည်ပြီး အနာဂါတ် စည်းလုံး ညီညွတ် မှု မပြိုကွဲ ဘဲ အေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရန်နှင့် အနောက် သားရခိုင် လူမျိုး များက ပွဲလန့်အောင် လုပ်ပြီးဖျာ ခင်း နိုင် ရန်ကြိုးစာ;ခြင်းကိုတားဆီးနိုင် အတွက် တာဝန် သိပြည် သူ တစ် ယောက် အနေဖြင့် အပြု သဘောဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်း အထောက် များကို ရှာဖွေစုစည်း တင်ပြပါကြောင်းလေးစားစွအသိပေးပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်သည်မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၇ံ၁၅’ နှင့် ၂၁ံ၁၇’၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၂ံ၅၅’ ကြားတွင် တည်ရှိ သည်။ ဧရိယာ စတုရန်မိုင်းပေါင်း ၁၄၂၀၀ ကျော်ရှိသည်။မြန်မာ ဘင်္ဂလား ရေကြောင်း၊ ကုန်း ကြောင်း မိုင် (၁၇၀) ရှည်လျး သည်။ တောင်မြောက်အရှည် (၃၆၀)မိုင် ရှည်ပြီး၊အရှေ့ အနောက် မိုင် (၁၇၀) မိုင်ကျယ်သည်။ တောင် ကန်း တောင် တန်း မှာ ၈၀% ခန့်ရှိ၍ ကုန်းမြင့လွင်ပြင်မှာ ၂၀% ခန့်ရှိ သည်။.
Map of Arakan State
(ကိုးကား ။ ။ကစ္စပနဒီမှ ဓညဝတီသစ္စာ – ၂၀၀၈ ခု၊စာပေဗိမာန်ဆုရ စာအုပ်)
(သုတပဒေသာ – ဝိဇ္ဇာ)ဆုရ
ပထမအကြိမ် ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် ၂၀၁၀ ဇန္နဝါရီလ
(စာရေးသူ ကလောင်အမည် မောင်မိုးယံ ၊ မူရင်းအမည် ဗိုလ်မှူးမျို့သန့်(ငြိမ်း)
စာပေဗိမာန် စာတည်းမှူးက မှတ်ပုံအမှတ် ၀၇၄၉၂ ဖြင့် ပုံနှိပ်၍ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၀၃၉၁၁ ဖြင့်ထုတ်ဝေသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယခင်က မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်က ၁၉၇၆ ခှုစ၊ဇန္နဝါရီ လ ၊ ပထမအကြိမ် ထုတ်ဝေသော တိုင်းရင်းသားရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ ( ရခိုင် ) စာအုပ် ၏ မှတ်တမ်း အရ အောက်ပါလူမျိုးများသည် တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
(၁၉ရ၈ ခု ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံကျောင်း သုံး စာအုပ်ကော်မတီ အထက် တန်း နှင့် အ လယ်တန်းမြန်မာနိုင်ငံ ပထဝီဝင်ပထဝီစာအုပ်စာမျက်နှာ – ၈၆ ကိုရှု )
ပြည်ထဲရေးနှင့်သာသနာရေးဝ်ကြီးဌာန၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီး ဌာန မှ ၁၉၇၂ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသော (ပုံစံရေးသွင်းရန်ညွှန်ကြားချက် ) စာအုပ်စာ မျက် နှာ ( ၄၃ ) ပူးတွဲ (က) လူမျိုးများစာရင်း ခေါင်းစဉ် အောက်ရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များ ( ၁၄၄ ) မျိုး နှင့် နိုင်ငံခြား သား လူမျိုး ( ၂၆ ) မျိုး ဟုဖေါ်ပြထားသည်။
နိုင်ငံခြားသားလူမျိုး ( ၂၆ ) မျိုးထဲတွင် ဒိုင်းနက် လူမျိုးကိုလည်း နိုင်ငံခြားသား လူမျိုး အ ဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
သို့သော် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်က ၁၉၇၆ ခှုစ၊ဇန္နဝါရီ လ ၊ ပထမ အကြိမ်ထုတ် ဝေသော တိုင်းရင်းသားရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ ( ရခိုင် ) စာအုပ်တွင်ဒိုင်းနက် ကိုတိုင်းရင်း သား မျိုး နွယ် စု အဖြစ် ထည့်သွင်း အသိအမှတ်ပြုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
မှတ်ချက်။ ။ထိုအချိန်က ၎င်း ( ၁၄၄ ) မျိုးတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးလည်း အပါအဝင်ဖြစ် သည်။
ကိုးကား။ ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဘဝသစ်ထူထောင်ရေးပါတီသတင်းလွှာ(ကင်းလွှတ်ခွင့် သက် သေခံ လက်မှတ် –အမိန့်အမှတ် ၂/၈၉ အရ ၁၉၈၉ ကင်းလွှတ် အမှတ် န/သ-၀၈၅ ဖြင့်)အထက် ပါလူမျိုးများတွင် ဒိုင်းနက်လူမျိုး၊ သက်လူမျိုး၊ မရမာကြီး လူမျိုး၊ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး တို့ ၏ဘာသာ စကားများ တူညီနီးစပ်ကြသည်။ဒိုင်းနက်၊ သက်၊မရမာကြီး တို့သည် ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး များသည်အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြ သည်။
ဒိုင်းနက်လူမျိုးများသည်မွတ်ဆလင်အနွယ်များဖြစ်ခြင်းဒိုင်းနက်လူမျိုးသည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွင်၇ှိအများအားဖြင့်ရခိုင်ပြည်မြောက် တွင်နေ ထိုင် ကြောင်း တွေ့ရသည်။ မွတ်ဆလင် အနွယ်များဖြစ်သည်။ စစ်တွေဂေဒဇေတိယား အပိုင်း (က) စာမျက် နှာ(၉၁) အရ ထိုဒိုင်းနက် တို့သည် တိဗက်မြန်မာ အနွယ် ဖြစ်ပြီး စစ်တကောင်း သွေးနွယ်သည် စစ်တ ကောင်း စကားပြောသည်။အဝတ်ဖြူ ဝတ်တတ်ပြီးတစ်ခြား လူမျိုးများနှင့်ရောနှော ခြင်းမပြုကြပေ။ရခိုင် ဘုရင်၏ ဖမ်းဆီးခံရသောကျွန်မွတ်ဆလင် များနှင့်အဆက် အနွယ်ဖြစ်ကြ သည်။ ယခုအခါဒိုင်းနက်တို့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ဘင်္ဂလားဒေရှ် စစ်တကောင်း တောင်တန်းဒေသတွင် ဒိုင်းနက် (ချက်မား) တို့က သီးခြားပြည်နယ် ရရှိထားသည်။
ရခိုင်လူမျိုးတို့ သည် ရခိုင်ဘာသာ စကားနှင့် မြန်မာဘာသာစကားကို အများဆုံး အသုံးပြုကြ သည်။
ရခိုင်ဘာသာ စကားနှင့် မြန်မာ ဘာသာစကားသည် အတော်များများတူပြီး ရ-သံ /r/ နှင့် ယ-သံ /j/ အ သံထွက်ကွာသည်။ ရခိုင်စာပေ အရေးအသားနှင့် မြန်မာစာပေအရေး အသားသ ည် ဆင် တူသည်။
ဦးနေဝင်း(မဆလ) အစိုးရက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု (၁၄၄)မျိုးရှိရာမှ (၈)မျိုးဖြုတ်ချခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာလူ မျိုး ကို လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်၍ဖြုတ်ချခဲ့ဖြစ်သည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေအရ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဖြုတ်ချခြင်းသည် စစ်အာဏာ ရှင်တစ်ပါတီ အစိုးရ နှင့် စစ်အစိုးရသည် ဘာသာရေးကို မုန်းတီး၊ လူမျိုးနွယ်စု တုံးအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ ယခုဒီမိုက ရေစီ ထွန်းကား နေသော ပါတီစုံစနစ်အောက်တွင် တိုင်းရင်းသား ဆိုသော ဝေါဟရ ၏အဓိပ္ပါယ် နှင့် ဥပဒေ နှင့် သမိုင်းအထောက်အထား၊လူ့အခွင့်အရေး အရ တိုင်းရင်း သားဖြစ် မဖြစ် ပြည်လွှတ်တော် တွင် အဆုံး အဖြတ်ပေး ရလိမ်မည်ဖြစ်သည်။
စာအုပ်၏စာမျက်နှာ(၈၆)တွင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများပျံ့နှံ့နေထိုင်ပုံပြမြေပုံတွင်ရခိုင်ြံပည်နယ်တွင်စစ်တွေလွင်ပြင်တွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးကိုထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားသည်။၎င်းပထ၀ီဝင်စာအုပ်ကို၁၉၇၈ ခုနှစ် က မြန်မာဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊
ကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မတီကထုတ်ဝေ၍ ကျောင်တွင်သင်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။(၁၉၇၈ -ခု –၇တန်း၊၈တန်း၊၉တန်း ၊၁၀ တန်း ပထ၀ီဝင်စာအုပ်စာမျက်နှာ -၈၆ မှမူရင်းပုံကိုစကင်ဖတ်၍အောက် တွင်တင်ပြထားပါသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ တည်ငြိမ်စွာဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ဖြစ် သည်။ ရခိုင် ဘုရင်နရမိတ်လှ လက်ထက်ဝန်ကြီးရာထူး၊ စစ်တပ်၊ ရေတပ်၊ ဗိုလ်မှူးရာထူး များ ၌ လည်း ကောင်း ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အစုအဝေး လူမျိုးစု ပင်ဖြစ် သည်။ မွတ်စ လင်မ် စာဆိုတော် စိုင် ယက်ဒ်ရှားအာလ်ဝါလ်(Sayued Shah Al wal) ၏ အဆိုအရ စန္ဒသူဓမ္မ ဘုရင်၏ နန်းရင်းဝန် ] `မာဂန်´မှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ဖြစ်သကဲ့သို့ဆိုင်ယက်မုဆာ (Sayed Mussa)၊ မူဂျာဟစ် (Mujaehi နှင့် ဆုလေမန် (Sulaiman)တို့မှာ ရခိုင်နန်းရင်း ၀န်ကြီးများ ဖြစ်ကြပြီး အရှရက်ဖ်ခန် (Asharaf Khan) မှာ စန္ဒသုဓမ္မ ဘုရင်၏ စစ်သူကြီး ဖြစ်ကြောင်း။
၁။ MKရာမန်-ရ ၂။ မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၀-ခု၊ မောင်သံလွင်၏ ရိုဝန်ညာလူ မျိုးများ။မဇ္စိုမဒေသ အန္ဒိယတိုက်၏ အရှေ့ ဘက်ဒေသနေထိုင်သူများကို အနောက်ဘက်ဒေသအခေါ် အဝေါ်ဖြင့် ရခိုင်ညာ၊ ရွမ်းကိုင်ညာ၊ ရွမ်းသား ဟုခေါ်ဆို သကဲ့သို့ ရခိုင် တောင်ပိုင်း သားတို့က လည်း ရွမ်းကိုင်ညာ၊ ရွမ်းကိုင် ညာ ခေါ်ဆိုကြရာမှ ရိုဟင်ညာ၊ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်လာ သည်။ “ဘင်္ဂါလီ ဒေသ၏ အရှေ့ ကမ်း ရှိ လူ့ အစု အဝေး´´ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အချို့က ရွာဟောင်း နေ ထိုင် ကြ သည့် ကျား ကဲ့သို့ စွမ်း ရည် သတ္တိ ရှိသည့် လူမျိုး၊ ရွာဟောင်း မှကျား၊ ရွာဟိန်းကျားမှာ ရိုဟင်ဂျာဟု ကောက် ချက်ပြုခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအား ၁၉၅၄-ခု၊ စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက်၊ည(၈)နာရီ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု၏ အသံလွှင့်မ်ိန့်ခွန်းဖြင့် အသိအမှတ် ပြု သကဲ့သို့ ၁၉၆၁-ခု၊ မေလ(၁၅) ရက်မှစတင်ကာ တပတ်(၃)ကြိမ် ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာဖြင့် မြန်မာ့ အသံမှ အသံလွှင့်ပေးခဲ့သည်။
၁၄။-ဦးကျော်ငြိမ်း၊ မာတလိ၊ နှစ်၃၀ မြန်မာ့အသံ၊ စာမျက်နှာ-၇၁ခိုင်နှင့် မြန်မာပြည်ရှိမွတ်စလင်မ်လူမျိုးများ ရာဇ၀င်။
Saturday, September 03, 2011 ROHINGYA BLOGGER No comments
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ (Rohingya in Myanmar Encyclopedia)
မြန်မာ့ သမိုင်းမှာ မက်ခရာ မင်းသားကြီးဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ မင်းသားနှစ်ပါးရှိပါတယ်။ မြန်မာ့ အဘိဓါန်ကို ချားလ်လိန်း နဲ့ အတူ ပြုစုခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီးက ပထမ မက်ခရာ မင်းသားကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုးတော်ဘုရား (ဗဒုံမင်း) နဲ့ မြောက်နန်းမိဖုရား သီရိမဟာ ရတနာဒေ၀ီတို့က နေ ၁၁၅၃ ခုနှစ် နတ်တော်လဆန်း ၁၅ ရက်နေ့မှာ ဖွားမြင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်နာမည် မောင်ဖြိုးလို့ ခေါ်ပြီး အလောင်းမင်းတရားကြီးနဲ့ ရုပ်ချင်း ဆင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ စာပေကို အလွန်တရာ လိုက်စားခဲ့ပြီး ကျမ်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကို မြန်မာဘာသာကို ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Download PDF :(9A) Click here
Tags: ဆောင်းပါးများ Permalink
← ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ သတင်းများ (စိတ်ဝင်စားစရာ) > ကလိစ်လုပ်ကြည့်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်အယ်ဒီအမတ်များ လွှတ်တော်တက်သည့်မြင်ကွင်း →
One comment on “မြန်မာ့ သမိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ များသည် တိုင်းရင်း သား လူမျိုးစု တခုအဖြစ် ရပ်တည် ခဲ့”
Danyawadi popular post ၊ လူကြိုက် အများဆုံးခေါင်းစဉ်များ…. | Danya Wadi April 28, 2014 at 1:57 am	Reply
[…] မြန်မာသမိုင်းတွင်ရိုဟင်ဂျာများသည် … […]